जागिरे आमाबाबुका सन्तानमा असर – दाङ खबर
अध्ययनमा २५ देखि ६३ वर्ष उमेरका विभिन्न व्यवसायमा संलग्न अभिभावकलाई समेटिएको थियो । अध्ययनको निष्कर्षले अभिभावकहरू डिजिटल माध्यममा व्यस्त रहँदा बालबालिकालाई नकारात्मक असर पर्छ भन्ने देखाएको छ । अभिभावकले काममा व्यस्त रहेर बालबालिकालाई समय नदिनु नै सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष हो । मनोचिकित्सक रिचा अमात्य भन्नुहुन्छ, “हामी काममा यति धेरै व्यस्त हुन्छौँ कि कार्यलयको काम पनि घरमा गर्छौ जसले गर्दा बाल मस्तिष्कमा आमाबुबाले माया नगर्ने जस्ता सोचाइ आउँछ ।
उहाँले अभिभावकले बालबालिका सँग समय नबिताउँदा उनीहरु अन्तै माया पाउने आशामा भाँैतारिन सक्ने जानकारी दिनुभयो । डा. अमात्यले अहिले काम नगरी खाने अवस्था छैन् कामबाट आइसकेपछि एक घण्टा भए पनि छोराछोरी सँग खेल्नु र रमाइलो गर्नुपर्छ । बुवाआमाले बालबालिकालाई समय नदिँदा अभिभावले कोहीसँग राम्रोसँग बोल्दा पनि रिस गर्ने, आमाबुबा देख्नेबित्तिकै रुने, विद्यालय जाँदा पनि एकोहोरो बस्ने, कोहीसँग मिल्न नखोज्ने, झगडालु स्वभावको हुने, कोही सानो बच्चालाई माया गरी बोलेमा टोलाएर हेर्ने जस्ता व्यवहार हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता बाल विशेषज्ञ रमेश मल्लले धेरै बच्चाहरूले आमाबुबाले माया नगर्ने गुनासो लिएर आउने गरेको बताउनुभयो । मायाको आशमा धेरै बिरामी हुने पनि उहाँको अनुभव छ । डा.मल्ल भन्नुहुन्छ, “बाल मस्तिष्कमा बिरामी भएपछि आफ्नो आमाबुबाले माया गर्ने सोचाइ हुन्छ त्यसैले जहिले पनि बिरामी हुन मन गर्ने बच्चाहरु पनि हुन्छन् ।”
बालबालिकालाई ‘साइकोलोजिकल’ असर परेको हुन्छ कि बिरामी भएपछि माया पाइन्छ त्यसैले उनीहरू आफूलाई बिरामी महसुस नै गरिरहेका हुन्छन् उहाँले थप्नुभयो, बालबालिकाले अफिस जाँदा खुसी भएर विदाइ पनि गर्छ तर आएपछि भने समय दिनुपर्छ । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परिवारले पार्ने असरको अनुसन्धानमा अभिभावकको कार्यस्थलको अनुभव प्राथमिकतामा परेको छैन । यसलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ किनभने बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पार्ने एक अर्को माध्यम हो, डा. मल्लले भन्नुभयो ।
भौतिक रूपमा आमाबुबाको उपस्थितिले छोराछोरीलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक असर गर्ने उहाँको भनाइ छ । अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूसँग विताउने समयले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थमा राम्रो असर पर्छ । मानसिक चिकित्सक रवि शाक्यका अनुसार पेसाले आफ्ना छोराछोरीमा पर्ने प्रभावबारे हामी चासो दिन्छौँ भने हामीले हाम्रो पेसा र छोराछोरीमध्ये कसलाई महोत्व दिइरहेका छौँ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
उहाँ थप्नुहुन्छ, योे त्यति गाह्रो कुरा पनि होइन । साथै हामीले आफ्ना छोराछोरीसँग भौतिक र मनोवैज्ञानिक उपस्थित हुनका लागि केही सिर्जनशील तरिका अपनाउन सक्छौँ जस्तै विदाको समयमा घुमाउन लग्ने, दैनिक आधा घण्टा भए पनि उनीहरूसँग समय विताउने, बगैँचामा फूल रोप्न लगाउने र आफू पनि काम गर्ने यसले गर्दा दिमागमा एउटा रमाइलोपन आउँछ । डा.शाक्य भन्नुहुन्छ, उपस्थिति धेरै समयका लागि हुनुपर्छ भन्ने होइन । मुख्य कुरा उनीहरूसँग उपस्थित हुँदा हामी कति ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।
आमाहरूले आफ्नो स्याहारका लागि बालबालिकासँग नरहँदा पनि त्यसको कुनै नकारात्मक असर देखिएन । तर आमाहरू कामबाट फर्किएर घरको काममा व्यस्त हुँदा भने छोराछोरीहरू व्यवहारगत समस्याले घेरिने सम्भावना बढी देखिएको पनि सो अध्ययनले प्रस्ट पारेको छ ।
Prevबजेट भोलि अपरान्ह ४ बजे
Nextबजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा सरकार
विद्यालय पुग्दै नेपाल प्रहरी
महिलाहरुमा देखिने यि यौन समस्याहरु र येस्को समाधान